Las Hurdes, nyika yezvishamiso zvepanyama uye yakanaka gastronomy | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | España, Chii chekuona
Las Hurdes iri kuchamhembe kwedunhu re Cáceres, uchiganhurana neiyo ye Salamanca. Inzvimbo yakapihwa imwe runako rwepanyama iyo, chaizvo nekuda kwechimiro chayo, yakagara inenge yakasarudzika kwemazana emakore. Nekudaro, kutaurirana kutsva kwakazvibatanidza mumaseketi evashanyi nekubudirira kukuru chaizvo nekuda kwenzvimbo dzayo dzinoshamisa uye neyakajeka idiosyncrasy.
Wakakomberedzwa ne Gata neFrance mitsara yemakomo, pamwe nenharaunda ye Nyika dzeGranadilla, Las Hurdes ine zvakawanda zvekukupa iwe. Kana iwe uchida kuziva iyi nharaunda yeExtremadura zvirinani, tinokukoka kuti utitevere isu parwendo rwedu.
1 Chii chekuona muLas Hurdes
1.2 Gasco Volcano
1.3 Gungwa rePoto
1.4 Jet yeMeancera
1.6 Iyo misha
2 Tsika nemagariro
3 Zvokudya muLas Hurdes
4 Ungasvika sei kuLas Hurdes
Chii chekuona muLas Hurdes
Kana dunhu iri rakamiririra chimwe chinhu, zviri, sekukuudza kwatakaita, nekuda kwekunaka kunoshamisa kwenzvimbo dzayo dzepanyama. Unogona kusvika pakuvaziva nekuita nzira dzinoyevedza trekking uye, pakati pavo, zvinotevera zvinomira.
Dzimwe dzenzizi dzinoyambuka Las Hurdes dzinoumba zvisinganzwisisike uye zvinoshamisa meanders. Semuenzaniso, kana iwe uchikwira ku Gasco maonero unogona kuona ichitenderera iyo yakaumbwa nerwizi Malvellido. Saizvozvo, kana iwe ukaswedera kune iyo maonero eLa Antigua, pedyo netaundi re Ríomalo de Abajo, Une iyo meander Melero, inozivikanwa kuva imwe yeakanaka kwazvo muSpain.
Ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kufarira muLas Hurdes. Iyo crater iyo, kwenguva yakareba, yaifungidzirwa kuti inokonzerwa nebasa rekuputika. Nekudaro, kuferefeta kwakazotevera kwakaratidza kuti kwaive nekuda kweiyo meteorite kudonha. Parizvino, ndizvo Asset yeSainzi Inofarira uye iri munharaunda yekunaka kukuru, ine holm miouki nemastrawberry miti.
Kune zvakare zvakawanda muLas Hurdes madziva echisikigo, kwaunogona kugeza uchinakidzwa nekuona kunoshamisa. Iyi ndiyo nyaya yaCharco de la Olla, padyo neguta re Zvidhina, uye nezve Las Mestas dziva, padhuze neiyo yapfuura.
Kutanga kubva parwizi rweMalvellido rwambotaurwa uye nekuenderera mberi neminda yemichero nemiti yemicheri, unogona kusvika kuChorro de la Meancera, mapopoma anoyevedza munzvimbo yerukova rwezita rimwe chete. Yakanyanya kufanana uye yakakosha zvakaenzana ndiyo Chorrituelo de Ovejuela, iyo inowira mudziva rinoshamisa rechisikigo.
Kumwe kuda kuziva kweLas Hurdes ndiko kuvapo munzvimbo dzinoverengeka dzedunhu repetoglyfu, mifananidzo yekufananidzira inoitwa pamatombo panguva Neolithic. Mamwe emadhizainisirwa akakosha ndeaya iyo yekuLas Erías, iyo inobva kuEl Riscal, iyo kubva kuna El Tesito de los Cuchillos o iyo ine Las Herraduras, vese vari mumaspala e Pinofranqueado.
Iyo nharaunda yeLas Hurdes ine yakasarudzika dhizaini yakavakirwa pa pabhodhi iyo yakawanda munzvimbo. Madziro uye matenga edzimba dzavo zvakavakwa neiri dombo, zvichipa iyo nzvimbo mhepo yakasarudzika. Iyi nzira yekuvaka ndeyekare kwazvo (inofungidzirwa kuve pre-Roma) uye ine hukama neiyo pallozas kubva kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSpain.
Mataundi enharaunda anonzi dzimba dzekurima, izwi raishandiswa munguva dzekare kune madiki madiki ekumusha akagadzwa padyo nemaguta eArabhu kana medinas.
Pakati pavo panomira Morisco mugwagwa, padyo neambotaurwa Melero meander uye neinonakidza indasitiri yemhizha. Iwe unofanirwa zvakare kuswedera padhuze ne Zvidhina, iri kuchamhembe kwedunhu uye yakarara pagomo kare Casares de Las Hurdes, anozivikanwa nevanoridza ngoma.
Asi kune dzimwe nhatu dzinonakidza dzimba dzekurima kunyangwe kubva pane yakakurisa maonero. Kuroora kwaPalomero Iine kota yekare yechiJuda paive neine sinagogi uye ne Machechi eMweya Mutsvene uye iyo Yakachena Conception, ose akavakwa muzana ramakore rechi XNUMX.
En Pinofranqueado, kuwedzera kune petroglyphs yatatotaura, iwe unayo iyo chechi yeMukadzi wedu weEncina, Yakavakwa muzana ramakore rechi XNUMX uye iine chakakwirira chakakwirira kubva muzana ramakore rechi XNUMX, pamwe ne Hermitage yeCristo de la Salud, kubva panguva imwe chete. Uye zvakare, kana iwe ukashanyira dhorobha pakupera kwevhiki kwekupedzisira kwaNyamavhuvhu, unogona kunakidzwa the Enramá, mutambo weRegional Tourist Kufarira.
Pakupedzisira mukati Nuñomoral anokwidziridza chechi yeMukadzi wedu weKubata. Uye zvakare, kubva munzvimbo ino iyo kukwira nzira yeBlack Stork, iyo inomhanya nemumupata weBatarquilla uye inokutendera kuti utarise mhando dzeshiri idzi.
Chimwe chinoshamisa cheLas Hurdes, pamwe nekuda kwekuzviparadzanisa nenyika, ndechekuti yakwanisa kuchengetedza tsika dzayo dzese uye kunyangwe mutauro wadzo. kunyanyisa. Zvinotonyanya kushamisa ndezvekuti mutauro wakasiyana uyu une hukama neiyo Asturleonian. Uyezve, ine zvinyorwa zvaro zvekare nekuda kwevanyori vakaita sa Clara Jara de Soto, kubvira muzana ramakore rechi XNUMX, uye José María Gabrieri y Galán, yeiyo XX.
Zvokudya muLas Hurdes
Maviri ezvishongo zvekudya zveLas Hurdes ndizvo Mudiwa y Mwana wembudzi. Iyo yekupedzisira yakagadzirirwa nenzira dzakawanda: mune chikafu, mundiro diki, ine mukume kana murimi webindu, uye yawana mukurumbira kunyangwe kunze kwedunhu.
Imwe chaiyo dhishi iyo iwe yaunofanirwa kuyedza ndiyo ndimu saladhi, hapana chakareruka, sezvo iine hwaro hwecitrus michero, mazai akaomeswa uye chorizo. Kune zvakare iyo shamisa mbatatisi kana iwe uchazofema; iyo rebujones kana gwayana rakateurwa rakazara, uye iyo nzara mhondi, yakanaka blie. Iwe unogona zvakare kuravira iyo Suckers, ayo ari chestnuts mumukaka.
Sehove, idzo rwizi dzinomira sa hove, barbels o matende. Dzimwe nguva iyo hove nyoro, iyo ine miriwo yakasiyana sechiperekedzero uye hwaro hwechingwa.
Kune dessert, iwe une yakanakisa pastry yakagadzirwa mabhanzi akaomeswa, vanasikana, shinda, florets, jekiseni o fritters. Uye, kuti unwe, iwe une waini yakanaka kunyangwe iwe uchikwanisa kupedzisa chikafu nechinonaka uchi bhurandi.
Ungasvika sei kuLas Hurdes
Nzira yakanakisa yekusvika kudunhu reExtremadura ndeye nemugwagwa mukuruZvichida nebhazi kana mumotokari yako pachako. Kana iwe ukashandisa izvi uye uchiuya uchibva kuchamhembe, iwe uchasvika neA-66, inonyatso kuzivikanwa seRuta de la Plata. Iwe unofanirwa kusiya izvi pakubuda kweLa Granja / Zarza de Granadilla uye, mushure mekupfuura nepagungwa raGabriel y Galán, iwe unowana Kuroora kwaPalomero.
Iyo imwechete A-66 iwe yaunogona kushandisa kana uchibva kumaodzanyemba. Asi, mune ino kesi, pakukwirira kwe Plasencia, unofanirwa kudzima iyo EX-370 iyo inokutora iwe kuenda Pinofranqueado. Chekupedzisira, kana iwe uchifamba kubva kuMadrid, yakanyanya kunaka sarudzo ndeye NV. Mushure mekupfuura Navalmoral de la Mata, unofanirwa kudzima iyo EX-A1 ​​uyezve iyo Ex-204.
Mukupedzisa, Las Hurdes ine zvakawanda zvekukupa nhasi. Iine zvishamiso zvechisikigo, zviyeuchidzo uye inofadza gastronomy. Haisisina kana chekuita nenharaunda yekumashure uye yakashushikana iyo yainoratidza Buñuel mune zvinyorwa zvake 'Las Hurdes, nyika isina chingwa'.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Las Hurdes
Chii chekuona muMalaysia